किन भइरहेछ अनावश्यक उत्खनन ?
टिप्पणी शनिबार, भदौ ११, २०७३
दाता पाइयो भन्दैमा धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको उत्खनन गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन।
नेपालमा पुरातात्विक अध्ययन तथा उत्खननको शुरुआत सन् १८९५ मा निग्लिहवा (कपिलवस्तु) र अर्को वर्ष लुम्बिनीमा अभिलेखसहितको अशोक स्तम्भ प्राप्तिलाई मान्नुपर्छ। यी दुवै प्राप्तिको श्रेय जर्मन पुरातत्वविद् डा. ए. फूहररलाई दिने गरिएको छ। वास्तवमा, फूहररले 'चान्स डिस्कभरी' को रुपमा ती प्राप्ति गरेका थिए। र, नेपालको पुरातात्विक अध्ययन–अनुसन्धान 'चान्स डिस्कभरी' भन्दा अघि बढेको विरलै पाइन्छ।
कपिलवस्तु क्षेत्रमा उत्खननका क्रममा भेटिएका 'पोष्ट होल' हरूको प्रसंगले निकै चर्चा पाएको देखियो। ती 'होल' हरू भवन बनाउन काठ वा बाँस गाड्दाका हुन् भन्ने कुरा नेपाली पुरातत्वविद् बाबुकृष्ण रिजाल नेतृत्वको उत्खनन पछि स्पष्ट भइसकेको विषय हो। तिलौराकोट आसपासका जमीनमा गरिएको जिओसर्भेले त्यहाँ फराकिला बाटा र दायाँबायाँ घरहरूको अवशेष रहेको बताएको थियो। त्यो अध्ययनपछि गौतम बुद्ध जन्मनुभन्दा अघि नै त्यस क्षेत्रमा वस्ती विकास भइसकेको प्रचार–प्रसार गरियो।